Global Voices teny Malagasy · Desambra 2014
Tantara misongadina tamin'ny Desambra 2014
Azia Atsimo30 Desambra 2014
Etazonia29 Desambra 2014
Tantara tamin'ny Desambra, 2014
Fahalalahàna miteny 30 Desambra 2014
Karaiba 29 Desambra 2014
Hatramin'izay dia ny teny frantsay no teny enti-mampianatra tao Haiti, eny fa na dia vitsy aza ny mpianatra teny niteny azy ity. Misy ankehitriny ny hetsi-pirenena manosika ho amin'ny fanabeazana ho amin'ny tenin'ny mponina hatry ny nahaterahana amin'ny teny kiriolona.
Hiaino Ny Salegy, Ilay Mozika Mitana Toerana Be Ao Madagasikara
Afrika Mainty 29 Desambra 2014
Karazana mozikam-pandihizana iray amin'ireo malaza indrindra ao Madagasikara ny Salegy, hatrany amin'ny tapaky ny taonjato faha-20. Amin'izao androntsika izao, ampanginin'ireo kintana tanora ny feon-gitara ary ampiakariny ho amin'ny gadona ankafizin'ny tanora kokoa ny feon-javamaneno
Tsy Mahalala Firy Ny Momba An'i Filipina ? Ireo Tsara Ho Fantatra Ho An'ireo Vao Sambany Hitsidika Anay
Filipina 28 Desambra 2014
Ny mpandrindra ny Global Voices any Azia atsimo-atsinanana, Mong Palatino, dia mandray am-pifaliana ireo mpandray anjara amin'ny Vovonana Iraisam-pirenena ataon'ny Global Voices, amin'ny alalan'ireo torohevitra sy tsara ho fantatra momba ity firenena ity.